Mpamatsy vokatra & orinasa | Mpanamboatra vokatra China
Orinasa ambony kalitao vita amin'ny hoditra PU tsara kalitao
Kahie ho an'ny mpianatra amin'ny lohataona Mifidiana taratasy ho an'ny kahie ho an'ny mpianatra: Voalohany, ny kalitaon'ny taratasy. Amin'ny ankapobeny, ny taratasy ampiasaina dia taratasy beige Daolin. Ny kalitaon'ireto taratasy roa ireto dia manana kalitao tsara indrindra eo amin'ireo taratasy fanoratana tsy mitovy. Ity karazana taratasy ity dia misy fahamendrehana kely, fandraisana ranomainty fanamiana, malefaka tsara, firafitry ny compact sy opaque, fanoherana rano mahery, vokany telo-mahery mahery ary kalitao tsara ary vidiny ambany! Noraisim-peo ho an'ny mpianatra namboarina 1. Ny taratasy dia iray amin'ireo ...
sary namboarina, kahie fampielezana pejy anatiny namboarina
Notepad fampiroboroboana lohataona lohataona Ny endrika bokikely tsotra dia tsy afaka manasongadina ny kolontsain'ny ekipa ary tsy azo amboarina. Ny kahie fampielezan-kevitra tsotra novokarin'ny orinasanay dia azo noforonina tamin'ny fomba tsara araka ny marika an'ny orinasa ary manao fampiroboroboana ny kolontsaina marika, ka ny fanomezana ny ekipa orinasa dia tsotra sy kanto kokoa, ary manasongadina ny tsiron'ny ekipa. Flannel Propaganda Notepad Notepad pejy anatiny fifantenana: naoty ankapobeny na dokam-barotra: taratasy kanto / froste ...
Fomba manokana fanao mahazatra sariitatra saribakoly biby sticker
Anaran-tsehatra: Sariitatra tattozy sariitatra Loko / style: loko, karazana taokantokan'ny taokala sary an-tsokosoko habe / modely isa: 10 * 20cm Taona azo ampiharina: 3+ Fitaovana: taratasy Fonosana vokatra: ravina tokana misy karatra lamosina ao anaty kitapo OPP Fomba: fanontana / fametahana, fonosana Fiainan'ny talantalana: 1 taona fenitra fiarovana: afaka mandalo ny fitsapana mifandraika amin'ny fenitry ny kilalao EU / US Abidia sticker amin'ny sariitatra abstract Amin'ny ankapobeny, ny sticker amin'ny tatoazy dia marika famindrana rano. Raha toradroa ny lamina ary tsy manana protrus be loatra ...
Volon-koditra namboarina, loko namboarina ivelany firavaka, notepad fanomezana maro-be namboarina
Ity notepad karazana-fanomezana avo lenta ity, ny akorandriaka ivelany dia voaravaka amin'ny hoditra, ary ny pejy anatiny dia vita amin'ny taratasy fanoratana mifangaro 100g avo lenta. Ity karazana taratasy ity dia misy malefaka kely, fanamaintanana fanamiana mitovy, malefaka tsara, firafitra henjana sy fahamendrehana ary fanoherana rano mahery. , Manana fahatsapana mahery vaika amin'ny lafiny telo, ary penina loharano miorina amin'ny rano avo lenta miaraka amina vy mitam-by misy lamina manokana amin'ny vala. Voaforona fonosana fanomezana vita amin'ny tanana faran'izay tsara. Ery ...
loko hoditra manokana fanao famaritana buckle notebook
Ity kahie fandraharahana avo lenta ity dia manana endrika bontolo sy bika ambany nefa tsy very ny heviny. Ny akorandriaka ivelany dia fonosina amin'ny tampon-koditra miloko marevaka, ny pejy anatiny dia vita amin'ny taratasy fanoratana mitambatra 80g, ary ny fanidiana dia rakotra vy vy sy hoditra. Marefo ny korteks ivelany. Ny pejy anatiny amin'ity karazan-taratasy ity dia manana elastika kely, fanamaintinana ranomainty fanamiana, fahosana tsara, firafitra tery sy tsy mivalana, fanoherana rano mahery ary telo mahery
namboarina manokana, lamina tsara tarehy namboarina, pataloha tombokavatsa mahafinaritra
Voninkazo tatoazy voninkazo Fametahana tatoazy estetika manome anao hatsarana kely amin'ny fiainanao mahazatra. Tsy maintsy manam-paharetana amin'ny fizotran'ny fampiasana sticker vita amin'ny tatoazy isika. Tokony esorintsika tsara ny sarimihetsika fanaovana pirinty amin'ny tatoazy. Tokony hampihena ny isan'ny vokatra eny an-joron-trano isika mba tsy hifikitra amin'ny hoditsika. Avy eo isika dia tokony handrakotra ny ambonin'ny tatoazy amin'ny lamina fisaka misy ny tatoazy. Avy eo isika dia afaka mampiasa lamba famaohana lena na rano mafana hanamboarana moramora ny sticker sticker. Antsasak'adiny taty aoriana dia naharihariny ny ...
Ataovy miavaka ny karazana lamina mahafinaritra, monochrome ary sticker matevina multicolor
Monochrome cool sticker sticker Ny tombony azo amin'ny sticker vita amin'ny tatoazy mahafinaritra: firafitra tsara, loko mazava ary vokany telo-mahery matanjaka. Fomba isan-karazany, kanto sy lamaody, fombafomba kanto, vidiny tiana indrindra ity vokatra ity dia mampiasa lakaoly azo esorina, izay azo ampiasaina miverimberina tsy misy soritra aorian'ny triatra. Tsy manimba ilay zavatra izy io, ary ny famerana ny hazavana sy ny haitao fakan-tsary dia tsy afaka mamokatra ny vokany. Ilay zavatra voaray dia azo antoka fa tsara kokoa noho ny sary. N ...
Kitapom-bokatra vita amin'ny horonam-bokatra namboarina namboarina
DETAILAM-pamokarana vokatra: fitaovana vita amin'ny varahina, taratasy vita amin'ny PP, horonantsary perla, fitaovana fanoherana ny sandoka, fitaovana vita amin'ny mangarahara, fitaovana vita amin'ny fehin-kofehy vita amin'ny volafotsy matte, fitaovana vita amin'ny silipo volafotsy vita amin'ny loko, fitaovana maoderina miova loko 3D, sns. araka ny fepetra takiana. Vokatra fototra vokatra: kalitaon'ny taratasy tsy misy fangarony, fitaovana manokana azo namboarina arakaraka ny takiana. Valin'ny savaivain'ny vokatra: matetika ampiasaina 30mm, 40mm, 75mm, othe ...
Ataovy miavaka ny karazana loko sy habe isan-karazany amin'ny sticker
Fampahalalana momba ny vokatra Anaran'ny vokatra: sticker volom-bolo mifangaro endrika loko Endri-javatra vokatra: fahatsapana tsara amin'ny tanana, fampisehoana tantera-drano tsara, tsy mora tapaka, dity sticker tsara, fotoana maharitra, tsy mora lavo, fomba isan-karazany, lamaody mahafinaritra sy avant-garde, fitaovana azo ampiasaina amin'ny tontolo iainana, fanontana maodely mazava, fametahana miverimberina, sns. Tombony azo avy amin'ny vokatra: varotra mivantana ny orinasa, fanamboarana matihanina, antoka ara-kalitao, fanaingoana ny lamina, LOGO, fitaovana, specifi ...